MonsterConnect: Bhadhara Chikwata Chako Chekutengesa Kuvhara, Kwete Kufona | Martech Zone
Sezvo takashanda kumakambani mazhinji eSawaS aine zvikwata zvekutengesa zvinobuda, zvakave pachena kuti kukura kwekambani kwainyanya kuvimba nekugona kwedu vamiriri vedu vekutengesa ku vhura bhizinesi idzva. Izvo zvakange zvisingatomboshamise, chero, kuti pakanga paine kuwirirana kwakazara pakati pevatengesi rep outbound call vhoriyamu uye yavo yakavharwa yekutengesa chiyero.
Kana izvo zvikakupa mufananidzo wepfungwa wevamwe vekutengesa rep vachitaura kune tarisiro mumasekondi makumi matatu uye vachirembera mushure mekunge varambwa, izvo zvaive zvisiri izvo zvachose. Mazhinji edambudziko aive asiri kufona foni, yaive ichinyatsobatana nemumwe munhu kune rimwe divi. Auto-dialing masisitimu anongobudirira zvishoma nekuda kwezvikonzero zvishoma:
Auto kudhiza tekinoroji haigone famba miti yefoni.
Auto kudhiza tekinoroji haigone kushamwaridzana nevachengeti vemagedhi.
Auto kudhiza tekinoroji haigone kusiyanisa pakati pevoicemails nefoni zvinokurudzira.
Iyo imwe tekinoroji kunze uko irikushandisa kuronga kwako kuita kune yakabuda B2B inotungamira chizvarwa kambani. Izvi zvinogona kubudirira zvakare, asi ikozvino zvinonyanya kutsamira kune vekunze vashandi kuti vawane kufarira netariro yako. Inongoitika inoda nhaurirano mbiri uye shanduko mbiri… imwe kuti uwane musangano, wozoti mumwe ku vhara kutengesa.
MonsterConnect inosanganisa webhu-based application ne vapenyu vamiririri iyo inofona yakafanana neako vatengesi vatengesi. Sezvo shamwari dzako dzakatsanangurwa dzasvika, ivo vanobva vabatana neako ekutengesa rep munguva chaiyo yehurukuro yekurarama. Shanduko inotora dzinenge mbiri-chegumi chechipiri uye isingawanikwe kune nzeve yemunhu!
Kana timu yako yekutengesa iri kushandisa Salesforce iwe unogona nyore nyore kuendesa data muMonsterConnect's Salesforce integrated sales automation software. MonsterConnect inopa Turnkey kuitisa iyo inosanganisa yako yehunyanzvi kana bhizinesi reSalesforce app neMonsterConnect yekubuda inosheedzera otomatiki software.
Kuwedzera hurukuro dzepamoyo, KWETE kufona, kunowedzera B2B kutengesa kutungamira chizvarwa
MonsterConnect inovandudza mashandiro ako ekuita manejimendi, inowedzera huwandu hwevatengesi vako, uye zvinonyatsopinda mumaakaundi ako akakosha Chikwata chako chekutengesa chinogona kuramba chiri pabasa - kutengesa - uye iwe unogona kupihwa chaiyo metric yekuyera kugadzirwa kwavo. Hapasisinazve mutengesi wako ane zuva rakashata nekuti havana kukwanisa kubata chero munhu… izvozvi vanozobata tarisiro zuva rese uye voita zvavanogona pa… kuvhara.
MonsterConnect iri zvakare rutsva rutsva pane iyo Martech Zone!
Tags: auto-dialerauto-dialer tekinorojib2bb2b inotungamira genb2b kutungamira chizvarwab2b kutengesaB2B kutengesa kutungamira chizvarwakufona tekinorojimupenyu mumiriririchikara batanidzakubatanidzakutengesa kufona tekinorojikutengesa kufonayekutengesa timu kuitamutengesi dialer
Finesse: Isa, Wedzera Zvigadzirwa, Ita Mari.
Jul 3, 2015 pa 8: 48 AM
Zvinhu zvikuru !! Pfungwa dzakanaka dzekuchinja. kunyemwerera uye kufona hakuna zvakunobatsira kana iwe usingakwanise kuwana hurukuro kune rimwe divi. Ini ndingati uku ndiko kusanyanya kushushikana kwevatengesi vazhinji, manzwi ezwi uye auto-menyu masystem anodya nguva yenguva ...